Spiro: AI ကိုအသုံးပြုသောတက်ကြွသောအရောင်းမြှင့်တင်ရေး Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 25, 2020 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 26, 2020 Douglas Karr
iro သင်၏အရောင်းခေါင်းဆောင်များအားလက်တွေ့ကျသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်သင်၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအတွက်တက်ကြွသောအကြံပြုချက်များပေးရန်အတုထောက်လှမ်းရေးကိုအသုံးပြုသည် လာမည့်အကောင်းဆုံးခြေလှမ်းများ ဆုံးရှုံးသွားသောအခွင့်အလမ်းများကိုကာကွယ်ရန်နှင့် ရောင်းအားကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်.
စုဆောင်းနိုင်စွမ်း ၁၆ ဆပိုဒေတာ
သင်သို့မဟုတ်သင်၏အရောင်းအဖွဲ့များအတွက်စွမ်းရည် 30% ပိုပြီးအလားအလာရောက်ရှိရန် တူညီတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြား၌တည်၏။
နိုင်စွမ်း ရောင်းအား ၂၀% ပိုမိုပိတ်ပါ အပေးအယူ
Spiro Include ၏ကောင်းကျိုးများ
Spiro သည်အရောင်းအလိုအလျောက်နည်းလမ်းသစ်ကိုမိတ်ဆက်သည်။ တက်ကြွသောဆက်ဆံရေးမျိုးစီမံခန့်ခွဲမှု.
အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ချက်များ - Spiro Assistant မှသုံးစွဲသူများအားနေ့စဉ် A လုပ်စာရင်း AI စာရင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုတိုးမြှင့်ပေးသောအသုံးပြုသူထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများကိုပေးသည်။
အသင်း၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်ပါ - ပါ ၀ င်သော VoIP ခေါ်ဆိုမှုနှင့် AI-generate ခေါ်ဆိုမှုစာရင်းများကအသင်းများကိုအလားအလာပိုများစေပြီးအလိုအလျောက်ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများသည်အဖွဲ့၏ထိရောက်မှုကိုတိုးစေသည်။
တက်ကြွထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသေချာပါစေ - Spiro သည်စကားဝိုင်းများအပေါ် အခြေခံ၍ တက်ကြွသောနောက်ဆက်တွဲသတိပေးချက်များကိုပေးပြီးသဘောတူညီမှုသည်အက်ကြောင်းများမှတဆင့်လျှောကျသွားသည်ကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
သဘောတူညီချက်တိုးတက်မှုအရှိန် - Spiro သည်ထိတွေ့မှုရမှတ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးအနီးကပ်ဆုံးအခွင့်အလမ်းများကိုကိုယ်စားလှယ်များကိုအာရုံစိုက်သည်။
Win-Rate ကိုအမြင့်ဆုံး - Spiro သည်ပိုက်လိုင်းမြင်သာမှုအပြည့်နှင့်ဆုံးရှုံးသွားသောအပေးအယူများကိုကာကွယ်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည်
အရောင်းခန့်မှန်းချက် - Spiro သည်သင်၏ပိုက်လိုင်းကိုအပြည့်အဝမြင်နိုင်ပြီးတိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်ညှိနှိုင်းမှုရမှတ်များသတ်မှတ်သည်။
Spiro သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကိရိယာကိုအစားထိုးခြင်းမပြုပါ။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ထိုကိရိယာများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ သို့သော်သင်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောအီးမေးလ်များကိုရည်ညွှန်းထားသည့်အဆက်အသွယ် ၅၀၀ ရှိမည့်သူများကိုနောင်အနာဂတ်နှင့်နေ့စွဲအတွက်အချိန်ဇယားဆွဲရန်စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။
Spiro Demo တစ်ခုကိုစီစဉ်ရန်
မှာ Sheryl မှအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကဗျာ ရှာရန်